Mabhuku aNoams Chomsky, bhuku renyika mumitauro. | Zvazvino Zvinyorwa
Noam Chomsky mabhuku
John Ortiz | | Biography, Bvunzo, Vanyori, Type, Literature
Munyori Noam Chomsky nemabhuku ake.
"Noam Chomsky Mabhuku" ndeyekutsvaga pawebhu nevadi vemitauro. Izvi hazvisi pasina, munyori anoonekwa semumwe wevanonyanya kukoshesa mitauro munyika, zvinyorwa zvake zvemutauro uye sainzi yekuziva zvakave nesimba guru pasirese.
Kusaziva ndiani masikati chomsky nhasi, iko kurasikirwa nechaiko chiratidzo cheakakura basa. Munyori wemuAmerica, nyanzvi yemitauro, muzivi akazvarwa musi waZvita 7, 1928. Anotorwa semumwe wevakakosha zvikuru vezana ramakore rechiXNUMX nerechiXNUMX. Zvinyorwa zveChomsky uye zvimwe zvinyorwa zvakamuwanisa mibairo yakati wandei munzvimbo dzakasiyana dzepasi.. Akadzidzisa paMassachusetts Institute of Technology (MIT) uye ikoko akasimbisa dzidziso yake yekugadzira girama, iyo yakakosha hwaro ndiyo syntax yemitsara. Mune zvematongerwo enyika, iye ari chikamu cheVashandi veMabhizimusi eWorld Union, mutsigiri weanarcho-syndicalism uye libertarian socialism.
1 Vechidiki uye zvidzidzo
2 Mipiro kune mitauro
3 Chomsky mune zvematongerwo enyika
4 Noam nhasi
5 Noam Chomsky Mabhuku
5.1 Ndiani anotonga nyika?
5.2 Zvinodikanwa Zviratidzo: Kufunga Kudzora muDemocratic Societies
5.3 Ngatitaurei nezvehugandanga
6 Mimwe mibairo uye mutsauko
Vechidiki uye zvidzidzo
Chomsky akaberekerwa muPhiladelphia, Pennsylvania, United States; vabereki vake vaive vaviri vekuUkraine vakapinda muchitendero chechiJuda. Baba vake William "Zev" Chomsky naamai vake Elsie Simonofsky vaive vadzidzi vegirama yemutauro wechiHebheru.
Mhuri yaNoam yaive yepakati uye chikamu che hudiki hwake aigara muPhiladelphia neNew York. Munzvimbo idzi jaya iri rakaona kusarongeka uye kushandiswa kwesimba kwakanangana nevanhu vakamukomberedza, nekuda kwechikonzero ichi kubva achiri mudiki aive chikamu chehurukuro nezvekodzero dzevanhu nezvematongerwo enyika.
Akadzidza chikoro chepuraimari paOak Lane Country Day Chikoro uye muna 1945 akapedza kudzidza mukirasi yechi184 yeCentral High School., kuva mumwe wevadzidzi vane mukurumbira. Mumakore iwayo akanyora rondedzero paSpanish Civil War uye fascism iyo yakaonekwa muEurope mushure mekumiswa.
Kubva muna1945 kusvika 1949 akadzidza paUniversity of Pennsylvania uye simba rake guru aive Muzvinafundo Zellis Harris. Mugore rekupedza kwake kudzidza, Noam Chomsky akaroora Carol Schatz, uyo akazova shamwari yeupenyu hwake.
Mipiro kune mitauro
Nguva pfupi apedza kudzidza, akatanga kudzidzisa paMIT pane kurudziro yeshamwari yake. Akatanga semubatsiri purofesa uye akakurumidza kukwidziridzwa, akadzidzisa mitauro uye girama kune undergraduate uye vakapedza kudzidza vadzidzi.
Muna 1957 akaburitsa rake rekutanga basa rakanzi Maumbirwo eSyntactic, kwaakataura zvaaifunga pamusoro pemitauro. Mufungo wake waive mukubatanidza girama yemitauro yakasiyana uye nekuiita ive yepasi rose. MunaEpril wegore rimwe chetero, mwanasikana wavo Aviva akaberekwa, uyo akazova mudzidzi uye mumiriri.
Muna 1960 mwanasikana wavo Diane akaberekwa uye muna 1965 akaburitsa Mativi eSyntax Dzidziso, bhuku raakanyora nezvese uye girama yekugadzira. Chomsky anotsanangura kuti syntax yemutsara inogona kuchinja zvisingaite kakawanda, pasina kudzikisira chirevo chayo. Makore maviri gare gare mwanakomana wavo Harry akazvarwa.
Muna 1972 akaburitsa Syntactics uye Semantics muGenerative Grammar, Mune ino bhuku, akaenderera mberi nedzidziso yake yekuti syntactics inopindirana nema semantics. Haana kutsvaga kuona kuumbwa kamwe chete kana chaiko kwemitsara, asi kubva pasimba rekugadzira dudziro huru kwazvo.
Chomsky mune zvematongerwo enyika
Pfungwa dzemunyori wezvematongerwo enyika dzakavakirwa pafilosofi yerusununguko, iyo inopesana nehurumende dzehudzvanyiriri, muripo wevaranda uye inoramba kupindira kwenyika. Inosimbisa mukana wesangano rezvematongerwo enyika rakavakwa kuburikidza neruzhinji uye magungano evagari.
Noam Chomsky akatorwa.
Munyori akapikisa hurumende yeUnited States, inosimbisa kuti kuchengetedzwa kwerunyararo kwave kuchishandiswa senzira yekurwisa kurwisa kwevarwi. Kuna Chomsky, mamiriro ehurumende anosimudzirwa kuburikidza nekuzvipira kunosimudzira zviitiko izvi.
Muna 2006 akaburitsa Nyika dzakakundikana. Kushungurudzwa kwesimba nekurwiswa kweruzhinji, kwaakaongorora kuti US yakabatana sei nematambudziko emamwe marudzi. Makore maviri gare gare, mudzimai wake Carol, uyo akarwara nekenza, akashaya.
Pakutanga kwebasa rake, munyori akasimbisa dzidziso dzake pagirama uye mitauro. Kuna Chomsky, pfungwa yemunhu ine ruzivo rwekuzvarwa pamusoro pekutaurirana nemutauro, izvi zvine pesvedzero kana zvinogona kuchinja zvichienderana nemamiriro ezvinhu mavanosimudzira.
Mumakore achangopfuura, munyori akatarisa pakuita kuti nyika yake ione uye nekushingairira kuita zvematongerwo enyika., akatsoropodza hurumende dzinoverengeka muLatin America ndokutaura pamusoro penhamo yeVenzuelan. Noam ane webhusaiti kwaunogona kuwana zvinhu nezve hupenyu hwake nebasa.
Heano akatorwa kubva kune rimwe basa raChomsky nezvematongerwo enyika uye mitauro:
Ndiani anotonga nyika?
"Muenzaniso wemubairo uye chirango unodzokororwa munhoroondo yese: avo vanozviisa pabasa rehurumende vanowanzo rumbidzwa nevevanhu vazhinji vehungwaru, nepo avo vanoramba kuzvibatanidza mukushandira nyika vanorangwa."
Zvinodikanwa Zviratidzo: Kufunga Kudzora muDemocratic Societies
“Zvakakosha kusimbisa kuti zvakawanda zviri panjodzi pano pane kushaya hanya, kusagona basa kana kushandira masimba. Kudzivirirwa kunopihwa magandanga ehurumende mu "mademokrasi achiri mudiki" kunopa chifukidziro shure kwavanogona kuita hutsinye hwavo, nerutsigiro rwakakosha rweUS, pamwe nekutarisa kwakatsamwiswa nekushungurudzwa kwevanhu veNicaragua, zvishoma, zvakafambisa zvirongwa zveReagan zvehugandanga uye hondo yezvehupfumi. "
"Unofanirwa kunzwisisa sarudzo dzemuAmerica maererano nezvadziri chaizvo, United States, muzvinhu zvakawanda, inharaunda yakasununguka. Izvo zviwanikwa zvemhirizhonga zvinogona kushandiswa neHurumende zvine hushoma, kune vanhu vazhinji vane mukana uye nekudaro, kune imwe nhanho, tinogona kutaura nezveruzhinji rwevanhu.
“… MuUnited States hamuna mapato ezvematongerwo enyika akadai seanogona kuve muhutongi hunogamuchirwa. Ichi ndicho chikonzero nei inenge hafu yevanhu isingavhoti ”.
Mimwe mibairo uye mutsauko
Guggenheim Scholarship muHumanities, United States neCanada (1971).
Mubayiro weKyoto mu Basic Sciences (1988).
Benjamin Franklin Menduru muCognitive uye Computing Sayenzi (1999).
Sydney Rugare Mubayiro (2011)
Mubairo Miganhu yeRuzivo muHumanities uye Zvemagariro Sayenzi (2019).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Noam Chomsky mabhuku
Mwenje yeBohemian, naRamón María del Valle-Inclán. Kuongorora
Jules Verne mabhuku